Imelana kanjani neXiaomi Redmi Note 9 Pro | Izindaba zamagajethi
Ngama-90s, lapho omakhalekhukhwini (bebengakabi yi-Smartphones) bebesezandleni zabantu abaningi, ipulasitiki kwakuyinto esetshenziswa kakhulu ngaphandle, ngoba ngenxa yokuguquguquka kwayo, ukumelana ngokuphelele nokuwa kanye / nokushaywa. Ngaphezu kwalokho, bekuyindlela engcono kakhulu yokwehlisa izindleko embonini ekhulayo.
Njengoba ubuchwepheshe buqhubekele phambili, hhayi kuphela izikrini ezikhule zinkulu, kepha futhi nezinto zokwakha sebebeke eceleni upulasitiki (yize isatholakala kumatheminali ashibhe) e-aluminium, insimbi nengilazi. Lezi zinto azifunisi ukushaqeka okufana nepulasitiki, abasebenzisi abaningi bakhetha ukusebenzisa izembozo.
Ngama-90s kanye nasekuqaleni kwawo-2000, amakhava ayesetshenziselwa ukubamba iselula ebhande, hhayi ukuyivimba ukuthi ingaphuli ekushintsheni kokuqala uma kwenzeka iwa, njengoba kunjalo nanamuhla. Uma ufuna i-smartphone emangele lokho ungaphuli lapho ushintsho lokuqala, iXiaomi Redmi Note 9 Pro iyindlela enhle ongayicabangela.
1 I-Xiaomi Redmi Qaphela ukumelana ne-9 Pro
2 Imininingwane ye-Xiaomi Redmi Note 9 Pro
I-Xiaomi Redmi Qaphela ukumelana ne-9 Pro
I-Remi Note 9 Pro imbozwe ungqimba lwengilazi olukhombise ukuthi lungelokumelana kakhulu emakethe, noma yikuphi ukuwa ngengozi okungenzeka ukuthi i-terminal ihlupheke. Abafana beXiaomi banesiqiniseko ngobuqotho besiginali yabo ukuthi bathumele ividiyo ku-YouTube ukuze siyibone kungaba ukumelana kanjani ngokuyibeka ezivivinyweni ezahlukahlukene kusuka ekuweni, ekushintsheni okungazelelwe kokushisa, kudlulisa ukuhlolwa ngakunye ngemiphumela emihle kakhulu.
Futhi, njengabakhiqizi abaningi, inikeza ukuvikelwa emanzini atshazayo, Ukuvikelwa kwe-IP68, ngakho-ke uma i-terminal ithola imanzi kancane ngeke sibe nenkinga. Lesi selula, njengabo bonke esingabathola emakethe ngesitifiketi esifanayo, asinakucwila (yize abanye abakhiqizi besisebenzisa njengesicelo sokukhangisa).
Kungenzeka ukuthi phakathi nezinsuku zokuqala, uma singacwilisa i-terminal emanzini ukuthatha izithombe ezinhle zeholide lethu ngaphandle kwe-terminal engatholi monakalo. Kodwa-ke, ngesikhathi sokusetshenziswa okujwayelekile, wonke ama-smartphones ahlupheke amakhefu amancane ezingaziswa ngeso lenyama nokuthi ngokuhamba kwesikhathi kungadala ukuthi ingxenye ethile yedivayisi iphuke ngokuphelele nokuthi amanzi angangena ngaphakathi.
Yize ukubonakalisile ukuqina kwalesi siginali, njengabanye abavela kumkhiqizi ofanayo, uma ifoni yakho ihlupheka, unezindawo ezahlukahlukene zokuyilungisa. Lungisa i-Xiaomi yakho ku-Service10 Kuyindlela enhle kakhulu okufanele uyicabangele, hhayi ngamanani ayo kuphela, kodwa futhi nejubane lensizakalo.
Imininingwane ye-Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Ku-Actualidad Gadget sibe nethuba lokuhlaziya ifayela le- Xiaomi Redmi Qaphela i-9 Pro, ukuphela okuthi, njengoba sigqamisa emaphoyiseni amahle, ivelele ukweqa kwekhwalithi ekwakhiweni, ukuzimela kude kakhulu neningi lamatheminali esingakuthola emakethe kanye nenani lezimpawu / lentengo esingeke sikuthole kwabanye abenzi.
I-Xiaomi's Redmi Note 9 Pro ivelele, ngokungeziwe ezintweni zokwakha ezinikeza ukubukeka okuhle, kwesikrini esingu-6,67-intshi ngesisombululo se-FullHD +, esinefomethi engu-20: 9. Iprosesa, i-Qualcomm's Snapdragon 720, ihambisana ne- I-6 GB ye-RAM ne-64 GB yokugcina (isikhala esinwebekayo ngamakhadi e-microSD).
Isigaba sezithombe, ezinye izici ezithakazelisayo zalesi siginali, igqamisa inzwa enkulu eyi-64 MP, i-angle ebanzi eyi-8MP, inzwa yokujula eyi-2 MP yemidwebo namalensi ama-5 MP macro, inzwa isivumela ukuthi sithathe izithombe zemininingwane engatholakali kumatheminali amaningi emakethe. Ikhamera yama-selfies ifinyelela ku-16 MP (akuyona i-angle ebanzi) itholakala engxenyeni engenhla engaphambili yesikrini.
IXiaomi Redmi Note 9 Pro iyasivumela qopha amavidiyo ngekhwalithi ye-4K kuma-fps angama-30, noma ngabe sikhetha lesi sinqumo, indawo yokugcina yangaphakathi izophela ngokushesha ngaphandle kokuthi sisebenzise ikhadi le-MicroSD ukuligcina.
Ibhethri, enye into ebalulekile yalesi siginali, ifinyelela ku-5.020 mAh futhi iyahambisana nokushaja okusheshayo okungu-30W (ishaja efakwe ebhokisini), kusivumela ukuthi sisebenzise ngaphezu kokusebenzisa kakhulu i-terminal usuku nosuku ngaphandle kokwesaba ukuthi izophuma imali ekushintsheni kokuqala, okwenza kube i-smartphone ekahle kulabo bantu abachitha usuku bengekho ekhaya futhi abanalo ithuba lokuyikhokhisa kalula.
Mayelana nentengo, iXiaomi Redmi Note 9 Pro ingatholakala kunoma yisiphi isitolo ngaphansi kwama-euro angama-200.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Xiaomi Redmi Note 9 Pro imelana kanjani